UAngela-Ixesha alisekho-ukubalwa ukuya eBukumkanini
UAngela- Ixesha alisekho
Inenekazi lethu leZaro ukuba	Angela nge-26 kaJulayi, 2020:
Ngale mvakwemini uMama wabonakala onke enxibe ezimhlophe. Ingubo awayeyinxibile yayigqume intloko yakhe nayo imhlophe, kodwa ngokungathi ibonakala kwaye ifakwe ubukhazikhazi.
Umama waye izandla zakhe zisongelwe emthandazweni; ezandleni zakhe yayineRosary emhlophe emhlophe, ngokungathi yenziwe ngokukhanyayo, yehla phantse ezinyaweni zakhe ezazinanto kwaye ziphumle emhlabeni.
Kumhlaba jikelele, imiboniso yemfazwe nogonyamelo ibinokubonwa, kodwa umama ngokuthe ngcembe wayeka ingubo yakhe yangaphantsi (ngokungathi inyibilikayo) phezu komhlaba ukuze iyigubungele. Esifubeni sakhe uMama wayenentliziyo yenyama enesithsaba sameva.
Ngamana uYesu Kristu angadunyiswa
“Bantwanana abonwabileyo, enkosi ukuba nilapha namhlanje kwiinkuni zam ezisikelelekileyo zokundamkela kunye nokuphendula lo mnxeba wam.
Bantwana bam, namhlanje ndiza kuwe njengoKumkanikazi noMama weerosari engcwele: thandaza, bantwana, thandazani.
Bantwana bam, namhlanje ndiyanimema kwakhona ukuba niguqukele. Bantwana bam, kubalulekile ukuba ungaphulukani nelinye ixesha: nihlala nikulungele ukwenza yonke into enibizelwa yihlabathi, nihlala nikulungele ukwenza imbonakalo kunye nokuthatha indawo yokuqala, kodwa xa ndinibiza ukuba niphile iiseli, uyalibazisa kwaye uthathe ixesha.
Bantwana bam, ixesha alikabikho; amaxesha amafutshane, ukuze nina nonke ningakulungelanga. Nceda undimamele uyeke ukuzixakekisa ngezinto ezingeyomfuneko, kodwa wenze oko kufunekayo. Ndidinga uncedo lwakho kwaye akufuneki ulinde ixesha elide. Ndikunye nawe, ndiyakubambelela ngokuqinileyo entliziyweni yam: ngena! Kwintliziyo yam engagungqiyo kukho indawo yabo bonke. Qhubeka nokwenza i-cenacles yomthandazo: oku kubalulekile. Ngamnye kuni unomsebenzi obalulekileyo, kodwa hayi ngendlela acinga ngayo; imisebenzi kaThixo inzima kakhulu - nikela kwaye unikele ngobomi bakho yonke imihla; musa ukuzibophelela ezinkulu osilele ukuzizalisekisa, kodwa ngamana ungazibophelela yonke imihla. ”
Ndaze ndathandaza kunye noMama, kwaye ekugqibeleni wabasikelela kuqala ababingeleli ababekhona, emva koko zonke iindwendwe.
Inenekazi lethu leZera ukuya eSimona:
Ndabona uMama, yonke enxibe ezimhlophe, entloko wayenengubo emnyama eluhlaza ehla ezinyaweni zakhe zingenanto ibekwe emhlabeni. Umama wayevule iingalo zomqondiso wokwamkela, kwaye ngasekunene kwakhe wayenerosari emide ingcwele ngokungathi yenziwe ukukhanya.
“Bantwana bam abathandekayo, ndiyanithanda: ukunibona apha kwiinkuni zam ezisikelelweyo kuyigcwalisa intliziyo yam ngovuyo. Bantwana, ndicela kwakhona umthandazo- umthandazo ngeCawe yam endiyithandayo, umthandazo kuBawo oyiNgcwele, umthandazo woonyana bam abathandekayo nabanyuliweyo. Bazihendwa kakhulu bububi kwaye yeha, xa omnye wabo ewa erhuqa abanye abaninzi kunye naye. Bathandazeleni, bantwana, ukuze babe ngumzekelo, ukuze babe sisikhokelo kunye nokukhanya okukhanyisa indlela ekhokelela kuNyana wam.
Bantwana, thanda kwaye uthandazele ababingeleli: thandaza, thandaza
Bantwana bam abathandekayo, ndicela kwakhona ukuba nithandazele eli lizwe lifelwe ukholo, lonakaliswe bububi: thandazani, bantwana. ”
Emva koko umama wathi kum: "Thandaza nam, ntombi", kwaye sathandaza kunye bonke abo babekhona. Emva koko uMama uqhubeke wathi:
“Ndiyanithanda, bantwana bam, ndinithanda kakhulu. Sukuphelelwa lithemba, bantwana bam. Thandazani, bantwana, thandazani.
Ngoku ndikunika intsikelelo yam engcwele. Enkosi ngokungxama uze kum. ”
← UGisella Cardia - Kungekudala wam…
Pedro Regis - Bhengeza uYesu… →